Misafidiana taovolo iray mifanaraka amin'ny famantarana ny zodiakanao? - Zodiaka
iphone 6s mikasika tsy mandeha
iphone 5 tsy afaka miantso na mandray antso
Mampiasa angona amin'ny iphone ve ny mailaka
Misafidiana taovolo iray mifanaraka amin'ny famantarana ny zodiakanao?
Choose Hairstyle That Matches Your Zodiac Sign
Ny famantarana ny zodiakanao dia tsy milaza zavatra momba ny toetranao fotsiny, fa momba ny toetranao ivelany na ny taovolo mety aminao.
Taovolo ho an'ny Ram
Rosie Huntington - Tinseltown / Shutterstock.com
Rams matetika manana volo matevina misy kapoka na curl. Satria matoky tena samirery ny Ram dia sahy misafidy loko na modely sahy izy. Fa ny taovolo manahirana sarotra izay mitaky fotoana sy / na ezaka be modely dia tsy an'ny Ram izay tsy manam-paharetana loatra amin'izany. Ny Ram dia karazana miovaova ary mety ho leo tanteraka amin'ny volon-doha iray andro iray manaraka. Tsy maintsy hafa noho izany avy hatrany. Avy eo aza misafidy taovolo izay mila fikojakojana be loatra amin'ny fikasana, satria ho reraka ianao tsy ho ela. Mikasika ny loko, ny Ram dia mety hipoitra tampoka ihany koa ary hisafidy loko somary marefo kokoa noho ny salanisa.
Ohatra amin'ny mahazatra amin'ny antokon-kintana Aries:
Taovolo ho an'ny omby
Ny kanto, kanto ary azo ampiharina dia teny mifanentana amin'ny fomban'ny Taurus. De Stier dia hifidy taovolom-behivavy sy loko vehivavy. Ny fijery mahazatra, toy ny bolo vita amin'ny bob, dia mety tsara amin'ny Taurus ihany koa. Saingy tsy misy taovolo manahirana na miakanjo tafahoatra. Mety tsy dia miraharaha izany. Raha vantany vao nahita taovolo mety aminy ny Taurus, dia azo inoana fa hitandrina izany mandritra ny taona maro izy. Ny Taurus dia mpandala ny nentin-drazana ary tsy tia fanovana.
Ohatra amin'ny mahazatra amin'ny antokon-kintana Taurus:
Taovolo ho an'ny Gemini
Ny fitiavana Gemini dia miova amin'ny resaka taovolo sy ny loko. Tian'izy ireo ny manandrana ary tia mijery ireo lamaody lamaody maka tahaka ny fijery farany. Afaka mandany fotoana tsy manam-petra mandrafitra ny volon'izy ireo amin'izay izy ireo amin'izay.
Ny volo fohy dia tsy misy dikany amin'ny Gemini, satria tsy afaka manao zavatra hafa amin'izany izy ireo. Ny kambana dia vonona tsara indrindra handeha any amin'ny mpanao taovolo matetika ary mandany ny fotoana ilaina amin'ny maraina amin'ny volon-dohany. Tsara ny mijery ny zava-drehetra….
Ohatra iray amin'ny mahazatra miaraka amin'ny marika zodiak Gemini:
Taovolo ho an'ny homamiadana
Selena Gomez - FPA / Shutterstock
Lobsters dia karazany malefaka sy reny. Matetika ny taovolo vehivavy dia mifanaraka tsara indrindra amin'izy ireo. Ny volo lava na antsasaky ny onja miaraka amin'ny onja ka toa tantaram-pitiavana dia ho taovolo tiany, raha manana ny volo ho azy izy ireo. De Kreeft dia tsy dia misafidy firavaka taovolo ultramodern na manaitra tokoa. Izy ireo koa dia karazana mijanona mandritra ny fotoana lava be miaraka amin'ny taovolo mitovy.
Ohatra iray amin'ny mahazatra miaraka amin'ny zodiac sign Cancer:
Taovolo ho an'ny Liona
Toy ny Rams, ny Liona dia matetika omena volo tsara tarehy sy matevina. Ny volo izay, toa ny toetran'izy ireo, dia samy manana ny sitrapony. Ny liona dia tia ny saina sy ny zava-mahafinaritra. Hitan'izy ireo ho toy ny ampahany amin'ny sarin'izy ireo ny taovolony ary vonona handany vola sy hifantoka amin'izany izy ireo. Tsy voatery ho ny volon-doha be trendiest fa tena manokana. Aleo manaitra kely. Zava-nisongadina tamin'ny loko misaraka, ohatra, na bob maranitra.
Ohatra amin'ny mahazatra amin'ny antokon-kintana Leo:
Taovolo ho an'ny Virjiny
Michelle Williams - Tinseltown / Shutterstock.com
Virtoista dia tonga lafatra. Mikasika ny volon'izy ireo ihany koa. Tsy maintsy mifanaraka tanteraka, ny volo rehetra amin'ny toerany. Ny curl dia tsy natao ho an'ny Virjiny, satria tsy mitovy amin'ny tianao mihitsy. Ny taovolo manapaka mahitsy sy mahitsy noho izany no safidy tsara indrindra ho an'ny Virjiny. Ary maro ny gel na tsifotra volo manampy amin'ny fitazonana ny volo amin'ny toerany. Ho fanampin'izany, dia tsy maintsy ho kanto sy kanto. Miaraka amin'ny Virjiny, matetika dia toa volom-bolo tsotra, fa tsy tianao ho fantatra hoe firy ny fotoana sisa tavela.
Ohatra amin'ny mahazatra amin'ny antokon-kintana Virgo:
Taovolo ho an'ny Libra
Ny mizana dia ny hatsarana voajanahary ao amin'ny zodiak. Matetika izy ireo dia mijery tsara nefa tsy mila ezaka be amin'izany. Ny mizana dia mahay mandrindra ny taovolony sy ny fitafiany amin'ny fomba mifanaraka tsara. Ny volo lava azon'izy ireo asiana randrana na apetraka dia safidy tsara ho an'ny Libra.
Ohatra iray amin'ny mahazatra miaraka amin'ny zodiac sign Libra:
Taovolo ho an'ny maingoka
Katey Perry - FPA / Shutterstock
Ny maingoka mazàna dia manana toetra matanjaka sy endrika matanjaka sy matavy. Ny taovolo miaraka amin'ny loko manaitra dia matetika no mandeha tsara. Afaka misafidy izy roa ho an'ny volo lava lava be volo, fa koa ho an'ny zazalahy fohy. Na inona na inona no safidiny, dia ho tsara tarehy izy ireo.
Ohatra amin'ny mahazatra amin'ny antokon-kintana Scorpio:
Taovolo ho an'ny Sagittarius
Scarlett Johansson - DFree / Shutterstock.com
Sagittarius dia tia fahafinaretana sy traikefa nahafinaritra. Te hanana endrika tsara ihany koa izy ireo, saingy tsy mila manao ezaka be amin'izany. Taovolo filalaovana lalao izay tsy manelingelina azy ireo rehefa manao fanatanjahan-tena na manao hetsika hafa dia aleony. Saingy na eo aza ny safidiny ho an'ny volon-doha mora, te-ho tsara izy ireo. Eritrereto ny volo fohy na antsasaky ny volony izay nendahina ho sosona na lava ampy hanaovana akanjo amin'ny rambony.
Ohatra amin'ny mahazatra amin'ny antokon-kintana Sagittarius:
Taovolo ho an'ny Capricorn
Zooey Deschanel - K. Hutchins / Shutterstock.com
Tsy mila manantena hadalana be loatra amin'ny Capricorn ianao. Tena matotra izy ireo ary tsy hanao zavatra adala amin'ny volon-dohany koa. Ny taovolo mahazatra amin'ny loko mahazatra dia matetika ny volon'ny volo nofidiny. Toy ny amin'ny Virjiny ihany, dia tonga lafatra izy ireo ary tsy maintsy mahazo aina ny volo. Ny Capricorn matetika dia misafidy taovolo izay mety amin'ny asa sy mivoaka miaraka amin'ny ezaka kely.
Ohatra amin'ny mahazatra amin'ny antokon-kintana Capricorn:
Ny volon'ny Aquarius
Jennifer Aniston - FPA /Shutterstock.com
Tian'i Aquarius ny fahalalahana ary aza manahy momba ny eritreritra na ny eritreritry ny hafa. Misafidy taovolo tiany izy ireo ary mety hahagaga. Tian'i Aquarius ny taovolo lamaody miaraka amin'ny lantom-peony manaitra sy tsy voajanahary indraindray. Manomboka amin'ny lava ka hatramin'ny taovolo somary fohy punk, azonao atao ny manantena ny zava-drehetra avy amin'ny Waterman.
Ohatra amin'ny famantaran-javatra momba ny antokon-kintana Aquarius:
Taovolo ho an'ny Pisces - taovolo Pisces
Jessica Biel - DFree / Shutterstock.com
ny fomba famadihana ny isan-jaton'ny bateria amin'ny iphone xs max
Amin'ny lafiny iray, ny Pisces dia tia ny fironana farany. Etsy ankilany, izy ireo koa dia te hampifanaraka amin'ny olona ifaneraserany. Ny trondro dia karazany malefaka sy vehivavy ary noho izany ny volo lava na volo lava dia safidy tsara matetika. Raha, na inona na inona antony, maka taovolo hafa izy ireo ary tsy tiany izany, dia mety ho sosotra izy ireo.
Ohatra iray amin'ny mahazatra amin'ny antokon-kintana Pisces:
Zodiaka sinoa 1961 - tanjaka, fahalemena,…
Zodiac Iza no mifanentana aminao - Miorina amin'ny famantarana ny volana
IREO CONSTELLATION 4 ZODIAC IREO NO HITSAROTRA INDRINDRA
Bibilava; Horoscope Zodiaka Sinoa
Rooster; Horoscope Zodiaka Sinoa
Zodiaka sinoa 1965 - tanjaka, fahalemena,…